Dadkoo wada shaqaynaaya! | Samfunnskunnskap.no
Hadafku waa in dadka inta badani shaqeeyaan. Norwey shaqo la’aantu way hooseysaa. https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn?de=Arbeidsledighet.
Dawlada Norwey waxay maal badan ku bixisaa sannad kasta waxqabad ku saabsan sidii loo abuuri lahaa ama loo ilaalin lahaa goobo shaqooyin. Waa kuwan tusaalooyin ku saabsan waxqabadyada noocan ahi:
Dawladu waxay caawimo dhaqaale ku taageertaa shirkadaha xaaladu muddo ku adkaato, si aanay shirkadu u kicin ama shaqaale-dhimis u samayn.
Waxay dawladu saameyn ku yeelaneysaa dakhliyada dadka iyada oo adeegsaneysa wadahadalo dhinaca mushaharka ah iyo siyaasada dulasaarka (ribada).
Dawladu waxay dhimi kartaa khidmadaha iyo cashuuraha shirkada.
Dawladu waxay saameyn ku yeelan kartaa ka shaqaaleysiinta xafiisyada dawladda. Maanta waxa qiyaastii qaybtan ka shaqeeya dad tiradoodu ku dhawdahey 750 000 qof.
Waa suurtogal in la dhimo waqtiga shaqada ama la yareeyo waqtiga hawlgabka.
Dawladu waxay lacag ku bixisaa koorasyo suuqa -haqada ah iyadoo adeegsaneysa Nav. Koorasyadani waxay dadka ka caawineyaan inay shaqo helaan. Sidoo kale waxa ka qeybqaadayaasha lagu siiyaa lacag maalmeed iyo caawimo shakhsiyan ah waqtiga ay koorasyadan noocan ah ku jiraan.
Nav waxay bixin kartaa kabid-mushahar. Taas macnaheedu waxa weeye inay shaqobixiye la bixinayaan mushaharka waqti, haddii taasi keeneyso in qof shaqo raadiye ahi sidaa shaqo joogto ama ku meelgaadh ah uu ku helayo.
Nav waxay wadashaqeyn la leedahey shaqobixiyeyaal kaas oo ku saabsan heshiis khuseeya goob shaqo oo loo dhanyahey (IA-avtalen).
Dawlada iyo shaqobixiyuhu waa inay u fududeeyaan qofka mudo dheer shaqada xanuun kaga maqanaa si uu shaqada ugu soo noqdo
Dawlada iyo shaqobixiyuhu waa inay u habeeyaan si qofka laxaadka la’i uu si fudud u shaqayn karo
Shaqaalaha da’da ah waa iney sii shaqeyn karaan muddo dheer.
Dhammaan qaxootiga Norwey ku cusub waxay degmada ay degan yihiin laga siiyaanayaa barmaamijka hordhaca. Kuwa ka qaybqaata barmaamijka hordhaca, waxa la siiyaa barashada afnoorwiijiga iyo cilmiga bulshada oo lacag la’aan ah. Dadka intooda badan inta ay barmaamijka ku jiraan waxay soo maraan shirkado lagu siiyo ku tababar afbarasho ama shaqo. Ujeeddada barmaamijka hordhaca waxa weeye in loo diyaargaroobo in la shaqeeyo ama wax la sii barto. Barnaamijka hordhacu wuxuu caadiyan socdaa labo sanno oo buuxa., kaqeybgalayaashana waxaa la siiyaa taageero hordhac ah si ay uga qeybqaataan.
Dadka mudo dheer shaqo la’aa, ee la siiyo caawimo dhaqaale, waxa la siinayaa fursad uu kaga qeybqaato barmaamijka aqoon sare u qaadida ee ay Nav bixiso. Barmaamijka aqoon sare u qaadidu wuxu ka qaybqaate kaste siinayaa waxbarasho ku habboon qofka iyo tababar shaqo si uu si fudud shaqo ugu helo. Barmaamijka aqoon sare u qaadidu wuxuu sida caadiga ah qaataa ilaa sannad oo waqti buuxa ah, ka qaybqaateyaashana waxa la siiyaa caawimo si ay uga qaybqaataan.
Shirkadaha waxa la siin karaa caawimo dhaqaale si ay koorasyo ugu bilaabaan shaqaalaha u baahan waxbarasho kordhineysa akhriska, qorida, xisaabta iyo kombuyuutarka. Sidan ayaa shaqaalaha aqoontooda sare loogu qaadi karaa si ey shaqadooda u sii heystaan iyo inay shaqooyin kale codsadaan.